Affiliates ဘို့အစီအစဉ်ကို - Asia Live Tech - MM
အွန်လိုင်းကာစီနို Affiliates ခဲ့ဆဲသောသူတို့အားမေတ္တာရှင်လောင်းကစားဝိုင်း, slot နှစ်ခု, ထီ, စားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းနှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ambiance များအတွက်အမြတ်အစွန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်နှင့်သာကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုပေးနိုင်ပါသည်အရမ်းပျော်ခဲ့သည်။ သို့သော်မိမိတို့၏ကုန်သွယ်မှုများအတွက်သူတို့၏အချစ်ရှိနေသော်လည်း, သူတို့ကအသစ်ကဥပဒေပြုမယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့အဘို့အတားအဆီးတစ်ခုတိုးပွားလာထားမယ့်အတိုင်း, အများကြီးရှိရာသို့အလျင်အမြန်လိုချင်ထက်ကိုရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီကောင်းတစ်ဦးသတင်းမဟုတ်ပါဘူး။
Affiliates ကသူတို့ကိုပေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျော်မွေ့။ Affiliate Marketing ကိုတွင်သူတို့နေအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့နှင့် passive ဝင်ငွေကိုခံစား, သာသူတို့ရဲ့ကွန်ရက်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ပတ်ကိုအလုပ်နာရီပေါင်းများစွာလိုအပ်နေနိုင်ပါတယ်။ White ကတံဆိပ်တပ်ရန်အွန်လိုင်းကာစီနိုအပေါ် Investing နေဖြင့်တစ်ဦးကသူဌေးကဖြစ်လာရန်: သို့သော်လည်းသူတို့ကိုချစ်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နေဖို့သူတို့ရဲ့ရှည်အတွေ့အကြုံကိုသုံးစွဲဖို့သူတို့ကိုဖွင့်ထိုသူတို့အဘို့အဖြေတစ်ခုရှိ၏။
Affiliates ကိုသိသောဥာဏ်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ tools တွေကို, အနည်းဗျူဟာများနှင့်ပြုလုပ်အတွင်းကွန်ယက်ရှိသည်။ အခုအသစ်ဦးတည်ချက်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ affiliates အဘို့, သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစား၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါ်သို့တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကခုန်အောင်ဘယ်လိုမေးပါလျှင်၎င်းသည် iGaming စက်မှုလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါ, ငါတို့သည်အဖြေရှိသည်:
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်,4ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်တစ်ဦး iGaming သူဌေးကဖြစ်လာ
အဆင့် 1 – အဆိုပါဒီဇိုင်း
ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအဆမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ထင်ရနိုင်ပါကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းပြီးနောက် affiliates အစီအစဉ်များနဲ့ layout ဖောက်သည်ထဲကအများဆုံးဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုအရောင်အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်အရာကိုငါသိ၏။ အဆိုပါလိုဂိုမေ့လျော့မပေးနေချိန်မှာသူတို့ကရိုးရိုးအဲဒီဆန္ဒကိုရေးသားဖို့ရှိသည်။
အဆင့်2– အဆိုပါဂိမ်းများ
အဘယ်အရာကိုဂိမ်းမပါဘဲ iGaming လိမ့်မလဲ? ဘယ်အရာကိုမျှတော်တော်များများတစ်ခုလုံးစည်း။ ဒါဟာခြေလှမ်းအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Affiliates အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိကို၎င်း, အကောင်းဆုံးဝင်ငွေတတ်၏။ ယင်းအားသာချက်များနှင့်လူကြိုက်များခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အောင်မြင်မှုအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်3– ထိုငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းများ
ခရက်ဒစ်ကတ်များ, Debit Card, ဘဏ်လွှဲပြောင်းထိုကဲ့သို့သော Paypal, ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum အဖြစ် ပို. ပို. လူကြိုက်များ cryptocurrencies အဖြစ်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ။ တစ်ဦးကပါးရည်နပ်ရည် Affiliate အော်ပရေတာအလုပ်လုပ်တယ်အရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူငြိမ်ဝပ်နှင့်မိဿဟာယမှာသူတို့ရဲ့ pastime ခံစားရန်လိုလားနှင့်ယခုကအတူတူကအားလုံးကိုယူဆောင်လာရန်အချိန်ရဲ့လှည့်,
အဆင့်4– အာရှတိုက်ရိုက် Tech မှမေးပါ
ကျွန်တော်ယူတောင်းဆိုနေတာခဲ့တာသူအပေါငျးတို့မှတ်စု? သင်သည်ထိုသူတို့လုပ်ပေးခဲ့သလား ဟုတ်ကဲ့? ကောင်းပြီ, သင့်အလုပ်ယခုပြုသောအမှုသည်တကား သင်သာအာရှတိုက်ရိုက် Tech မှသူတို့ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းအမြတ်အစွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးမယှဉ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းကြီးသားအပေါင်းတို့, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခက်အခဲများကိုစောင့်ရှောက်တာ, သင့်အိပ်မက်တွေကို၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း, သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံဖြည့်ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချတ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားကြိုဆိုကြသည်သငျ့သညျ။ ကျနော်တို့အတိုဆုံးနှောင့်နှေး၌သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကြလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်: အာရှတိုက်ရိုက် Tech မှမှာကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်အတွက်ဖြစ်ချင်တယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျသူတို့မူဝါဒပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် PKR.com တူသောပိတ်ပစ်သည့်အခါအဓိကအမှတ်တံဆိပ်၏ကရုဏာတော်မှာဝင်ငွေနဲ့မဖြစ်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်လိုကြသည်။ တောင်မှတနေ့ ALT တည်ရှိမနေသင့်, သင်ဆဲသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဝင်ငွေတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေတဲ့ဘိုအယူအဆအတွက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲဝင်ငွေဆက်လက်ရပါလိမ့်မယ်။